‘निर्माण क्षेत्र जुर्मुराए स्टिलको बजारमा तरङ्ग आउँछ’
Ambe Group, one of Nepal's major conglomerates and one of the best steel company which was founded in 1982.
Projects using Ambe Steels
कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता छ । नेपालमा सिमेन्ट, छड जस्ता उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेका छैनन् । तर, अब विस्तारै निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा निर्माणसम्बद्ध उद्योग–व्यवसायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान सरकारको पनि छ । अहिले नेपालमा २५ भन्दा बढी स्टिल उद्योगहरु छन् । तर, प्रतिस्पर्धा भएकाले बजारमा नयाँ उद्योगलाई टिक्न सहज छैन । पुराना छड उद्योगहरु भने अहिले आफूहरुलाई बजारको ठूलो समस्या नरहेको बताइरहेका छन् ।
नेपालका स्टिल उद्योग, तिनका उत्पादन, बजार, गुणस्तर, उद्योगीका समस्या र चुनौतीबारे हामीले अम्बे ग्रुपका स्टिलका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक शोभाकर (हरि) न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौं ।
लकडाउन खुलेपछि निर्माणका काम आंशिक रुपमा सुरु भएका छन् । अहिले नेपालका स्टिल उद्योगहरुले चुनौतीको सामना कसरी गर्दै छन् ?
कोरोना महामारीको असर नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा छ । स्टिल उद्योगहरु अछुतो रहने कुरै भएन । हामी आफूलाई जोगाउने र सकेसम्म अवसर सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने किसिमबाट अघि बढेका छौं ।
चैतदेखि लकडाउनमा बस्दा हामीले सरकारको नीति नियम माानेकै हो । केही समय उद्योग बन्द नै गर्यौं । कर पनि तिरेकै हौं । श्रमिकलाई व्यवस्थापन गरेकै हौं । अप्ठेरो अवस्थामा पनि सकेजति क्षमतामा उद्योग चलायौं । धेरै कठिनाइ भएपनि हामीले सरकारबाट ठूलो सहयोग पाएनौं । बैंकबाट एक–दुई महिनाको किस्ता सार्नेबाहेक अरु केही भएन ।
अब नयाँ अवस्था अनुसार अघि बढ्दैछौं । विस्तारै आफ्नो उत्पादनलाई बढाउँदै लगेका छौं । गएको महिनामा हामीले कूल क्षमताको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्‍यौं । त्यही अनुसार बिक्री पनि गर्‍यौं । अहिले विस्तारै माग पनि बढ्दै गएको छ ।
स्टिल र सिमेन्टजन्य समाग्रीहरुको बजार भनेको निर्माण क्षेत्र हो । निर्माण उद्योगले जति गति लिनसक्छ, हाम्रो उत्पादनको माग त्यसैअनुसार बढ्ने हो ।
लकडाउनको एक महिनाजति त उद्योग बन्द नै गरेका हौं । निर्माणको काम विस्तारै सुरु भएपछि माग हेरेर हामीले उत्पादन बढाउँदै लगेका छौं । लकडाउनको असर र महामारीको डर पनि अब विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
मंसिर आउँदैछ, वर्षा र मुख्य चाडबाड पनि सकिँदैछ । अब निर्माणको कामले गति लिन्छ भन्ने विश्वास छ । निर्माणको सिजनमा स्टिल उद्योगलाई महामारीले पारेको असर ‘रिकभर’ गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ ।
महाभूकम्पपछि नेपालमा निर्माणको काम तीव्र बन्दा स्टिल उद्योगले ठूलो लाभ पाए भन्ने छ । समग्रमा नेपाली स्टिल बजार कस्तो छ ?
स्टिल उत्पादनले राम्रो बजार पाउनेमा म आशावादी छु । अब राम्रै समय आउनेछ । केही समयमा कोभिड–१९को खोप पनि निस्केला । त्यसपछि त विश्व अर्थतन्त्रको स्वरुप नै फेरिएला ।
नेपालमा जसरी निर्माणको काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन । अहिले धेरै परियोजनामा काम रोकिएको छ । सरकारले पनि आयोजनाहरुलाई थप समय दिएको छ । नयाँ परियोजनाहरु अन्योलमा छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट पनि ‘होल्ड’ भएर बसेका छन् ।
परियोजनाहरुका साइट खुल्दा निर्माणसँग जोडिएका उद्योगहरुमा एउटा तरङ्ग आउँछ । अवस्था सहज भएर सबै काम एकैपटक खुल्ने भएकाले भविष्य राम्रो देख्छु । नेपालमा अहिले २५–२६ वटा स्टिल उद्योग छन् । सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गरे भने मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुन्छ ।
महाभूकम्पपछि स्टिलको धेरै माग आइदियो । सबैतिर एकसाथ पुनर्निर्माणको काम हुँदा बजारले मागेजति दिनै नसकिने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा ५–७ वटा नयाँ उद्योग थपिए । त्यसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा भयो । अम्बेले चाहिँ प्रतिस्पर्धाकै कारण बिक्री कम भएको अनुभव गरेको छैन । मूल्यमा भने लड्नु परेको छ । हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढेका छौं ।
गुणस्तरलाई अम्बेले कसरी प्रत्याभूत गरेको छ ?
नेपालमा जति पनि स्टिल उद्योग छन्, सबैको आ–आफ्नो उत्पादन प्रक्रिया छ । कति ठूला उद्योग छन्, कोही साना छन् । अम्बेले दैनिक १४ सय टन छड उत्पादन गर्छ । यो ठूलो ब्रान्ड बनिसकेको छ । ६–७ सय करोड लगानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कुरै हुँदैन ।
सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि उत्पादनका क्रममा केही गल्ती हुन सक्छ । कहिलेकाँहि ‘प्रोसेसिङ इरर’ हुन सक्छ, तर त्यो नियतबस भएको हुँदैन । तर, सबैको हकमा यस्तै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । गुणस्तरमा ध्यान नदिनेले पनि बजारको प्रतिक्रियाअनुसार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो रोलिङ मिल चौबिसैघण्टा चल्छ । स्टिलका उच्च गतिमा चल्ने मिल हुन्छन् । अम्बेले प्रत्येक घण्टा गुणस्तर जाँच गर्छ । हाम्रो उद्योगमै स्तरीय ल्याब छ । प्रोसेसिङमा कुनै गल्ती भएको रहेछ भने त्यो लटको छड बजारमा पठाउँदैनौं ।
बजारमा बिकेका छडको गुणस्तरमा उपभोक्ता सन्तुष्ट भएनन् भने त्यसको अर्थ छैन । बिक्रीको अर्थ बेचिसक्नु हैन । हामी हाम्रो उत्पादनलाई बजारमा ग्राहकले कसरी लिनुभयो भन्नेसम्मको विश्लेषण गर्छौं । भैरहवामा ४०० टनको स्टिल उद्योग चलाएका हामीले आज नेपालगञ्जमा एक हजार टनको अर्को उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था उपभोक्तालाई चित्त बुझाएरै आएको हो ।
छड उद्योगमा लगानी थपिँदै छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ, अम्बेका विशेष बजार रणनीतिहरु के छन् ?
हाम्रो भैरहवा प्लान्टको आधा उत्पादन त पश्चिम नेपालतिरै जान्थ्यो । काठमाडौंसहित देशका अन्य भागमा माग अनुसार छड पुर्याउन सकेका थिएनौं । त्यसैले नयाँ प्लान्ट लगायौं । नेपालगन्जको प्लान्टका लागि हिजो भैरहवाको प्लान्टले सिर्जना गरेको सहज बजार छ । प्लान्ट थपेपछि बजार विस्तार पनि गरेका छौं । हामीलाई बजारको समस्या छैन ।
बजारमा दुई हजार अनलाइन न्युज पोर्टल छन्, तर तपाईंहरु अनलाइनखबरको पाठक बढी छन् भन्नुहुन्छ । हामीलाई पनि उपभोक्ताले त्यस्तै विश्वास गर्नुभएको छ । अम्बे सुपरिचित ब्रान्ड पनि हो, गुणस्तर र स्तरीय डेलिभरी सिस्टम पनि छ । हामी ग्राहकप्रति जिम्मेवार पनि छौं ।
उद्योग थपिदा केही दबाव त हुन्छ, तर बजारमा अम्बे स्थापित छ । त्यसलाई कायम राख्ने आधारहरु पनि हामीसँग छन् । अहिले नै हामी क्षमताको ९० प्रतिशत हाराहारी उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं ।
सबैले गुणस्तरको दाबी गरिरहेका हुन्छन्, ग्राहकले कसरी पत्याउने ?
हाम्रो छड राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजनाहरुले विश्वासका साथ प्रयोग गरेका छन् । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनादेखि धरहरा, संसद भवन, गोदावरीमा निर्माणाधीन सभाहल लगायतमा हाम्रो स्टिल प्रयोग भएको छ । पुलसहितका ठूला आयोजनाहरुमा पनि हाम्रो उत्पादन प्रयोग भएको छ । यसले हामीलाई गुणस्तर कायम गर्न झकझकाइरहन्छ ।
फेरि ठूला आयोजनाहरुमा जथाभावी छड प्रयोग हुँदैन, पहिले गुणस्तर जाँच हुन्छ । ठूलो लगानी र सोच राखेर अघि बढेकाले हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने सवालै आउँदैन ।
ग्राहकले भरपर्दो स्टिल कसरी चिन्ने र छान्ने ?
झट्ट हेर्दा सबै छड उस्तै देखिन्छन् । बाहिरी रुप हरेर गुणस्तरको भेउ पाइन्न । मूल कुरा छडको ‘डक्टिलिटी’ र ‘एलोंगेसन’ हो । छडमा यी चिज छ, छैन भन्ने पत्तो पाउन सजिलो पनि हुँदैन । त्यसैले ग्राहकले सकेसम्म परिचित ब्रान्ड रोज्नुपर्छ । जुन पायो त्यही ब्रान्ड उठाउँदा गुणस्तर कमजोर रहेछ भने भविष्यमा पछुताउनुपर्ने हुन्छ । म पूरा इमानका साथ भन्छु– अम्बे लिँदा ग्राहकले पछुताउनुपर्दैैन । एक–दुई रुपैयाँ सस्तो भनेर नाम नै नसुनेको ब्रान्डमा जानु उचित हुन्न ।
फेरि अम्बेको मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर नाफा बढाउने रणनीति हाम्रो छ । कसैले थोरै उत्पादन गरेर नाफा लिने रणनीति बनाएका हुन्छन् । हामी भने गुणस्तर कायम राखेर धेरै उत्पादन गर्ने, मूल्य सकेसम्म कम राख्ने र धेरै बिक्री गर्ने अनि नाफा निकाल्ने नीतिमा छौं । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अम्बे गुणस्तरको प्रतीक हो ।
स्टिल उद्योगलाई बजारको समस्या छैन । र पनि, सरकारसँग विभिन्न माग राखिरहनुभएको हुन्छ, किन ?
मुख्य सवाल विद्युतको हो । हिजो लोडसेडिङ हुँदा मुस्किलले ८–१० घण्टा प्लान्ट चलाउन पाइन्थ्यो । २४ घण्टा उद्योग चलाउन पाउनु हाम्रो लागि दुर्गममा सडक पुग्दाको जस्तै खुसी हुने अवस्था थियो । यति हुँदा पनि विद्युत महसुल उद्योगमैत्री छैन ।
बिजुलीको मूल्य अरु देशको तुलनामा नेपालमा बढी छ । कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइएको भन्सार दर पनि उच्च छ । त्यसलाई घटाए नेपाली छड विदेशी बजारमा पनि जान सक्छ । बिलेट, स्पन्ज आइरन लगायत स्टिल उद्योगका कच्चा पदार्थमा सरकारले प्रोत्साहनमुलक भन्सार दर तोक्नुपर्छ ।
सरकारलाई राजस्व हेर्नुपर्ने बाध्यता होला, तर भन्सार घटाउँदा उत्पादन लागत घट्छ । उत्पादन सस्तो भए बजारमा माग बढेर राजस्व अझ बढ्ने अवस्था आउँछ । भन्सार दर घटेको लाभ ब्यापारीले मात्र लिन्छन् भनेर सोच्न हुँदैन ।
साथै, नेपालमा फलाम खानीहरु पनि भेटिएका छन् । अब धौवादी लगायत खानीबाट फलाम उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसो भए फलाम आयातमा विदेशिरहेको रकम जोगिन्छ । हाम्रा स्टिल उद्योगहरु थप प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । त्यस्तो वातावरण बन्यो भने भारतीय बजारमा पनि हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
© Ambe Group. All Rights Reserved.